अनलाइनमै जापानी भाषाको कोर्ष कसरी पढ्ने ? | Nepali In Japan
Wednesday, December 1जापानबारे सबै कुरा
तपाई जापान बस्नु हुन्छ र यही काम पाउनु भयो भने अन्ततः तपाईले जापानी भाषा सिक्नै पर्छ । नयाँ भाषा सिक्न शुरुमा चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । तर कठोर मेहनत र लगनशिलताले यो चुनौती जित्न सकिन्छ । यसमा स्व–अध्ययन पनि निकै महत्वपूर्ण छ । सिकाईमा सफल हुन सही भाषा विद्यालय र शिक्षक उत्तिकै जरुरी हुन्छ । दुर्भाग्यबस कोरोना भाइरसको महामारीबीच भाषा सिकाईको प्रक्रिया सुस्त भएको छ । आजको यस लेखमा हामीहरुले अनलाइन जापानी कोर्सका लागि उपयोगी केही वेबसाइटबारे जानकारी दिन थालेका छौं ।
१. शोको जापानी विद्यालय
यहाँ अनुभवी प्रशिक्षकहरु छन् । यिनीहरुले तपाईको प्राथमिकताअनुसार विविध खालका पाठ्यक्रम पढाइरहेका छन् ।
कसका लागिः जेएलपीटी उत्तिर्ण गर्न चाहने, जागिरका लागि अन्तर्वार्ताको तयारी गरिरहेका, बोली, पढाई र लेखन शैली सुधार्न चाहनेहरुका लागि
मूल्यः शुरुआती कोर्स र मध्यम कोर्सका लागि मासिक ५ हजार येन ।
इटल्की जापानको सबैभन्दा ठूलो भाषा सिकाउने वेबसाइट मध्ये एक हो । यहाँ आफ्नो लक्ष्य र इच्छाअनुरुपका १० हजारभन्दा बढी शिक्षकहरुबाट भाषा सिक्न सकिन्छ । प्रशिक्षकहरु सबैले आफ्नो मूल्य तोकेका हुन्छन् । सबैको मूल्यमा फरक फरक हुन सक्छ । तपाईसँग धेरै पैसा छैन भने आफ्नो आवश्यकताअनुसारको प्रशिक्षक रोज्न सक्नु हुन्छ ।
कसका लागिः कुराकानी वा अनुभवका लागि जापानी भाषा सिक्न चाहने जोकोहीका लागि
मूल्यः एक घन्टाको पाठको लागि ८ सय देखि ६ हजार येन
प्रिप्लेमा तपाईले जापानी भाषा भन्दा बढी सिक्न सक्नु हुन्छ । यहाँ सिपालु जापानी प्रशिक्षकहरु टन्नै छन् । यहाँ प्रशिक्षकहरुले भिडियो प्रिजेन्टेशन आफ्नो परिचय दिनु पर्छ । यी भिडियोहरु हेरेर तपाईले प्रशिक्षकहरुको व्यत्तित्व अनि सिकाइको शैली हेर्न सक्नु हुनेछ । यी शिक्षकहरु विश्वका जुनसुकै स्थानका हुन सक्छन् । तपाई जापानमा हुनु हुन्न अनि आफू जहाँ छु त्यही स्थानको प्रशिक्षक चाहनु हुन्छ भने यो वेबसाइट निकै उपयोगी छ । छानेको प्रशिक्षकसँग परीक्षण पाठ लिनुभयो भने तपाईले कम्तिमा ६ पाठको सिकाइ योजना किन्नै पर्छ । प्रिप्लेका प्रशिक्षकहरुले प्रतिघन्टा ६०० येनदेखि ४ हजार येनसम्म मूल्य तोकेका छन् ।
कसका लागिः कुराकानीको लागि जापानी भाषा सिक्न खोजिरहेकाहरुलाई
मूल्यः एक घन्टाको लागि ५०० देखि ४ हजार येन
४. जापा टक
कुराकानी बोलीचालीको लागि जापानी भाषा सिक्न चाहनेहरुका लागि यो वेबसाइट उपर्युक्त छ । यो प्रणालीमा प्वाइन्टमा आधारित छ । जस्तैः तपाईले २ हजार येनमा २ हजार प्वाइन्ट किन्न सक्नु हुन्छ । तपाईले यो भन्दा धेरै प्वाइन्ट पनि किन्न सक्नु हुनेछ । कुनै योजना साइन अप गरेर मासिक रुपमा प्वाइन्ट कमाउन पनि सक्नु हुन्छ । प्रिप्लेमा जस्तै यसमा पनि तपाईले जापाटक डेटाबेसमा रहेका सयौं जनाबाट शिक्षक रोजेर खाफूलाई उपर्युक्त हुने मिति र समय छान्न सक्नु हुन्छ । औसत ५०० प्वाइन्टको पाठ करीब २५ मिनेटको हुन्छ । ५० मिनेटको पाठको १ हजार प्वाइन्ट वा १ हजार येन पर्दछ ।
कसका लागिः वास्तविक जापानीहरुसँग जापानी भाषामा कुराकानी गर्न खोज्ने सबैका लागि
मूल्यः २५ मिनेटको पाठको लागि ३९० येन
५. सेन्सेई शोकाई
पेशागत जापानी प्रशिक्षक अनलाइन वा प्रत्यक्ष रुपमा खोज्नका लागि यो वेबसाइट उपर्युक्त छ । आफ्नो व्यक्तिगत सिकाइ प्रोफाइल बनाएर आफूले सिक्न खोजेको पाठ समेटेर बनाइएको अनुरोधलाई सेन्सेई शोकाईको सूचना बोर्डमा पोष्ट गरिनेछ । तपाईको अनुरोधमा लक्ष्य, जापानी भाषाको विद्यमान स्तर र चाहेको समय आदि हुन्छ । सूचना टाँसेपछि तपाईले मूल्य र अनुभवसहित प्रमाणित शिक्षकहरुबाट अफर पाउनुहुनेछ ।
कसका लागिः योग्य शिक्षकहरुबाट पाठ सिक्न चाहने जोकोहीका लागि
मूल्यः एक अनलाइन पाठका लागि २ हजार येन (सामान्य प्रत्यक्ष सिकाई भने ३ हजार येनदेखि विविध मूल्यका छन् ।)
६. निहोङ्गो स्कूल
निहोङ्गो अनलाइन स्कूलमा तपाईले आफ्नो लक्ष्यसँग मेल खाने व्यक्तिगत पाठहरुको विकास गर्न सक्नु हुन्छ । यस वेबसाइटले स्काइपमार्फत अंग्रेजी भाषामा सहायता सहित अनलाइनमा १ः१ जापानी पाठ सिकाइन्छ । निहोङ्गो अनलाइन स्कूलका निजी स्काइप पाठहरु व्यक्तिगत र प्रभावकारी ‘रिमोट’ अध्ययन अनुभव चाहने हर कोहीका लागि उपर्युक्त छ । यस वेबसाइटमा तपाईले घरमै बसेर अंग्रेजीमा कुराकानी गर्न सक्ने दक्ष शिक्षकहरुबाट जापानी भाषा सिक्न सक्नु हुनेछ ।
Tagged in Japanese Language, Online Study, Online Websites
Prevकिन जोडिदैंछ ड्राइभिङ लाइसेन्सलार्ई माइनम्बर कार्डसँग ?
Nextजापानमा बिजुलीका पोलहरु जमिनमुनि किन गाडिएको छैन ?
यस्तो छ स्क्रिनिङ सर्टिफिकेट बारे बिस्तृत जानकारी
शरिर ‘फिट’ राख्ने ५ जापानी तरिका